LUNGISA II-ICON ZENKQUBO EZINGEKHOYO KWIWINDOWS TASKBAR - ITHAMBILE
Lungisa ii-icon zenkqubo ezingekhoyo kwiWindows Taskbar
I-Taskbar ye-Windows yindawo egcina indlela emfutshane kuseto olubalulekileyo lweWindows ezinje ngeVolumu, iNethiwekhi, Amandla, ii-icon zeZiko lokuSebenza njlnjl.Ikwanayo nendawo yesaziso ebonisa ii-icon zenkqubo ezisebenzayo kwaye ibonisa zonke izaziso ezinxulumene nezi nkqubo. Ukwazi kufuneka ubenoluvo lokuba ezi icon zenkqubo ephethwe yiWindows Taskbar zibaluleke kakhulu ekusebenziseni kwemihla ngemihla kwabasebenzisi, cinga ukuba kwenzeka ntoni xa ezi icon zilahleka kwiWindows Taskbar. Ewe, xa kusitsho njalo, kunjalo apha, ke makhe sijonge ingxaki ngaphambi kokuzama ukuyilungisa.
Ngamanye amaxesha, iiVolumu zeVolumu okanye zenethiwekhi ziyalahleka kwi-Taskbar, edale iingxaki ezininzi kubasebenzisi beWindows njengoko bekufumanisa kunzima ukubrawuza olu seto. Ngoku khawufane ucinge ukuba kunokuba nzima kangakanani kubasebenzisi abaqhelekileyo ukufumana ezi setingi ngalo lonke ixesha befuna ukutshintsha isicwangciso samandla okanye ukunxibelelana nenethiwekhi yeWiFi. Ukuqala kwakhona kubonakala kunceda ekubuyiseni ii-icon, kodwa oko kubonakala ngathi okwethutyana emva kwexesha elinye okanye enye inkqubo iya kuphinda ilahleke.
Unobangela wale ngxaki ubonakala engaziwa njengeqela leengcali elinoluvo olwahlukileyo malunga nalo mbandela. Kodwa ingxaki ibonakala ngathi yenziwa ngamangeniso eRegistry angcolileyo e-IconStreams kunye ne-PastIconsStream isitshixo esibonakala ngathi siyaphikisana neWindows kwaye yiyo loo nto isenza ukuba inkqubo ye icon inyamalale kwiTaskbar. Ke ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha masibone ukuba silungisa njani ii icon zeNkqubo ezilahlekileyo kwiWindows Taskbar kunye nesikhokelo esidweliswe ngezantsi.
Sebenzisa i-hard drive yangaphandle njengeefestile zegusha 10
Indlela ye-1: Qinisekisa ukuba ii-icon zeNkqubo zivaliwe kuseto
Indlela yesi-2: Ukucima ii-IconStreams kunye ne-PastIconStream Registry Entries
Indlela yesi-3: Ukulungiswa kwerejista
Indlela 4: Sebenzisa inkqubo yokubuyisela
1. Cinezela iWindows Key + ukuba ndivule iiSetingi zeWindows kwaye ucofe kuyo Ukwenza umntu.
2. Ukusuka kwicala lasekhohlo imenyu, khetha Ibar yomsebenzi.
3. Ngoku nqakraza Khetha ukuba yeyiphi i icon evela kwibar yomsebenzi.
4. Qiniseka ukuba Umthamo okanye Amandla okanye ezifihliweyo ii icon zenkqubo zivuliwe . Ukuba akunjalo, nqakraza kwi-toggle ukuze ubenze.
5. Ngoku phinda ubuyele kuseto lwe-Taskbar, olucofa Cima okanye ucime ii icon zenkqubo.
6. Kwakhona, fumana ii icon ze Amandla okanye uMthamo kwaye uqiniseke ukuba zombini zisetelwe kwi-On . Ukuba akunjalo, nqakraza kwi-toggle kufuphi nabo ukusetha i-ON.
7. Phuma kuseto lwebar yomsebenzi kwaye uqalise iPC yakho.
Ukuba Vula ii-icon zenkqubo okanye ucime zingwevu, landela indlela elandelayo ngokulandelelana Lungisa ii icon zenkqubo engekhoyo kwiWindows Taskbar.
1. Cinezela iWindows Key + R emva koko uchwetheze regedit kwaye ucofe u-Enter ukuvula uMhleli weRegistry.
iqhosha lokuqala alisebenzi windows 10
2. Jonga kwezi Zitshixo zeRegistry zilandelayo:
HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Classes LocalSettings Software Microsoft Windows CurrentVersion TrayNotify
3. Qiniseka Itreyi yeNotify icacisiwe Kwaye kwifestile yefestile yasekunene fumana ezi zinto zimbini:
4. Cofa ekunene kuzo zombini kunye khetha Cima.
5. Ukuba uceliwe isiqinisekiso, khetha Ewe.
6.Vala uMhleli weRegistry kwaye ucinezele Ctrl + Shift + Esc Izitshixo ngokudibeneyo zokuphehlelela Umlawuli womsebenzi.
7. Fumana umkhangeli.exe kuluhlu emva koko ucofe ekunene kuyo kwaye khetha Ukuphelisa Umsebenzi.
8. Ngoku, oku kuya kuvala i-Explorer kwaye uyiqhube kwakhona, Cofa kwiFayile> Yenza umsebenzi omtsha.
9. Chwetheza umkhangeli.exe kwaye ucofe u-Kulungile ukuqala kwakhona i-Explorer.
windows 10 nyusa isikrini esimnyama ngesikhombisi
10. Phuma kuMphathi woMsebenzi, kwaye kuya kufuneka uphinde ubone ii-icon zenkqubo yakho elahlekileyo ibuyele kwiindawo zazo.
Le ndlela ingentla ifanele ukuba nayo isombulule ii icon zenkqubo engekho kwi-Windows Taskbar, kodwa ukuba awukaziboni ii icon zakho, kuya kufuneka uzame indlela elandelayo.
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Imigaqo-nkqubo Explorer
3. Cofa ekunene nganye kwaye ukhethe Cima.
4. Emva kokucima la maxabiso angentla, khangela le ndlela ingezantsi yeRegistry kwaye uphinde inkqubo:
HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion imigaqo-nkqubo Explorer
6. Ngoku phinda kwakhona indlela yoku-1 kwakhona.
Inkqubo yokubuyisela ihlala isebenza ekusombululeni impazamo; ngoko ke Inkqubo yokubuyisela inokukunceda ukulungisa le mpazamo. Ke ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha run inkqubo yokubuyisela ukuya Lungisa ii-icon zenkqubo ezingekhoyo kwiWindows Taskbar.
Lungisa iTouchpad ayisebenzi ngaphakathi Windows 10
Zonke iifayile zakho zilapho uzishiye khona
Lungisa Windows 10 Imouse iyabanda okanye imiba ebambekayo
Khubaza iNqaku lokuSondeza ngaphakathi Windows 10
Yiloo nto uphumelele Lungisa ii-icon zenkqubo ezingekhoyo kwiWindows Taskbar kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
Uguqula njani i-mbr kwi-gpt ngexesha lokufakwa kweewindows
ayinakuprinta emva windows 10 uhlaziyo
ayikwazi ukuqhagamshela kuhlaziyo lweWindows
windows 10 i-wifi igcina ukunqamla u-2019
Itunes impazamo 0xe80000a iphone xr
imenyu yokuqala ayisebenzi